Fodian-dRavalomanana : Heloky ny Filoha ve? -
AccueilRaharaham-pirenenaFodian-dRavalomanana : Heloky ny Filoha ve?
17/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny faha-28 aogositra 2010 no nivoaka ny didim-pitsarana manameloka an’i Marc Ravalomanana higadra mandra-pahafatiny noho ny raharaha 7 Febroary 2009. Tsy nanatrika ny fotoam-pitsarana azy ity filoha teo aloha ity tamin’izany fotoana noho ny tsy fahafahany nody an-tanindrazana. Manodidina ny 18 tamin’ireo voampanga no tonga niatrika izany Fitsarana ny taona 2010 izany. Efa adihevitra be tamin’izany andro io Fitsarana ny raharaha 7 Febroary io. Nanambara mazava mihitsy mantsy ny ankolafy Ravalomanana fa tsy manana zo hitsara ny raharaha ny fitondrana Tetezamita azo tamin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana, ny voampanga rahateo moa nitsipaka avy hatrany ny fitondrana ny raharaha teo anatrehan’ny Fitsarana. Nivoaka ihany anefa ny didim-pitsarana ny faha-28 aogositra 2010 izay nanameloka an-dRavalomanana Marc higadra mandra-pahafatiny.
Tafaverina an-tanindrazana i Marc Ravalomanana rehefa nijoro ny Repoblika faha-IV. Zo fototra maha olombelona ho an’ny teratany rehetra manerana izao tontolo izao ny mody an-tanindrazana na meloka na tsia ny tenany. Heloky ny filoha Hery Rajaonarimampianina àry ve izany ny nanaiky ny fodian-dRavalomanana? Fa anjaran’ity filoha teo aloha ity ny mandini-tena noho ireo zava-nitranga teto amin’ny firenena hatramin’izay nidirany teo amin’ny sehatry ny fanaovana politika. Rà mandriaka hatrany ary efa notaterina teto no nisy nanomboka tamin’ny fotoana nandraisany ny fitondrana ny taona 2002 sy ny nialany teo amin’izany fahefana izany ny taona 2009. Nifandrafy ny teo anivon’ny Tafika, lasa mpifahavalo ny vahoaka, feno hipoka gadra politika ny fonja, maro ireo aina nafoy sy nitondra takaitra ankoatra ny faharavam-pananana. Tsy nandingana an’i Madagasikara intsony ary mety ho mandra-pahafatiny i Marc Ravalomanana raha tsy izao fitondrana Hery Rajaonarimampianina izay nanaja ny zo fototra maha olombelona izao. Vao nigadona teny Faravohitra anefa ny tenany dia ny « haka fitondrana fa tsy mahandry izany 2018 izany » no nivoaka ny vavany voalohany.
Hatramin’ny androany aloha raha ny antontan-taratasy eny anivon’ny Fitsarana dia mbola voaheloka higadra mandra-pahafatiny i Marc Ravalomanana. Tsy mbola nisy didy hafa nanafoana izany. Tsy anjaran’ny filoham-pirenena velively anefa ny mampihatra izany didim-pitsarana izany fa an’ny Fitsarana ary efa nambara teto ny hoe « nahoana no tsy mitaky izany ny filohan’ny SMM na koa manao fanambarana ny amin’ny tokony hampiharana izany didim-pitsarana izany? ». Maro ny resaka niandrasana fitenenana avy amin’ny SMM raha tsy hilaza afa-tsy ny momba ilay famoahana tsiambaratelon’ny famotorana tany amin’ny facebook araka ny nambaran’ny Bianco ankoatra ity didim-pitsarana momba an-dRavalomanana Marc ity.